Igwefoto Google ga-enwe njikwa aka n'oge adịghị anya | Androidsis
Igwefoto Google ga-enweta njikwa aka
Igwefoto Google bụ otu n'ime ngwa ndị ama ama na ubi gị na Android. Ọtụtụ na -ahụ ya dị ka ihe kachasị mma na ngalaba a, obere ekwentị na ahịa nwere ike iji ya, dị ka Xiaomi Mi A3 n'oge na -adịbeghị anya. Agbanyeghị igwefoto a dị mma, ọ bụghị nke kacha mma n'ahịa, ihe ọtụtụ ndị ọrụ maara, yabụ ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ na ndozi.
Otu n'ime ndozi nke nwere ike ịbịaru na igwefoto Google bụ mmegharị aka. Ọ bụ maka ohere inwe njikwa akwụkwọ ntuziaka ọkachamara n'ime ya. Ọrụ nke nwere ike bụrụ ezigbo ọganiihu maka ngwa a, na -eme ka ọ ka mma.
Dịka ozi ọhụrụ siri dị, amụtarala na ngwa igwefoto Google ọ ga -enwe njirimara nke DSLR. Enwebeghị nkọwa ndị ọzọ, agbanyeghị na a na -eche na ọ na -ezo aka mmegharị aka ọkachamara. Mana anyị ga -eche ka akwado nke a n'ihu ọha.
Ruo ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe njikwa akwụkwọ ntuziaka a na ngwa, a ga -eji ngwa ọzọ. Yabụ na nke a ga -abụ ọganihu dị mkpa maka ndị ọrụ gam akporo ndị chọrọ iji ya na ekwentị ha. Ọ ga -abụ ọkwa n'oge na -adịghị anya.
Ugbu a anyị enweghị ụbọchị maka mbata ndị a mmegharị aka na igwefoto Google. Ma eleghị anya, na ọgbọ ọhụrụ nke Pixels, nke ahụ ga -eweta usoro nkwalite dị mkpa na mpaghara a. Yabụ na anyị nwere ike ịtụ anya mgbanwe ole na ole na nke a n'aka ụlọ ọrụ.
Anyị na -atụ anya ịmatakwu banyere ya njikwa akwụkwọ ntuziaka na anyị ga -ahụ na igwefoto Google n'oge adịghị anya. Ọ bụ ọrụ ga -enye gị ohere iji ngwa a n'ụzọ ka mma na ekwentị gị. Yabụ na anyị na -atụ anya ozi ndị ọzọ gbasara nke a n'izu ndị na -abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Igwefoto Google ga-enweta njikwa aka